केटीहरुको कल खासै आउँदैन, म ‘अलरेडी बुक्ड’ छु भनेर हो कि ! (भिडियोसहित) | नेपाल आज
केटीहरुको कल खासै आउँदैन, म ‘अलरेडी बुक्ड’ छु भनेर हो कि ! (भिडियोसहित)
शुक्रबार, १५ मङि्सर २०७४ गते प्रकाशित
काठमाडौं । पोखराका अनिमेष शाही हिमालय रोडिजका ‘टाइटल’ विजेता होइनन् । तर उनको ‘फेम’ विजेताको भन्दा कम छैन । लठ्ठ परेका आँखा, लामो कपाल, अग्लो कदका कारण उनले वलिउड स्टार सञ्जय दत्त झै देखिने गरेको प्रतिक्रिया पाएका छन् । तर उनलाई अरु कोही जस्तो नभएर अनिमेष शाही जस्तै देखिन मन छ ।
पुरुष भएर बच्चा (अण्डा) पार्नु पर्ने ‘एक्ट’ पूरा गरेर उनी हिमालय रोडिजमा छानिएका थिए । त्यो क्षण सम्झदै उनले भने, ‘मन गहु्रंगो भएको थियो । महिलाको फिलमा बच्चा जन्माउन सजिलो थिएन । तर गरेँ ।’
सजिलो काम के हो ? कुन काम गाह्रो हो ? अनिमेष भन्छन्, ‘जुन काम गाह्रो मान्छौं र गर्दैनौं भने त्यो काम जीवनभर गाह्रो नै भएर बस्छ । तर गरेपछि त्यो हल्का हुन पुग्छ । मैले रोडिजमा सिकेको यहि हो । यसले मानिसको जीवन पद्धतीमै सुधार ल्याउने रहेछ ।
रोडिज एक रोमाञ्चक टेलिभिजन कार्यक्रम हो । यो यसकारण पनि रोमाञ्चक छ कि यसले ‘सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट’ स्वीकार गर्छ । अनिमेष भन्छन्, ‘रोडिज पनि यस्तै छ । सबैलाई साथमा लिएर जान त सकिन्छ तर अन्तिममा अरुलाई उछिनेर नै रोडिज बन्ने हो ।’
१८ हप्तासम्म चलेको हिमालय रोडिजको पहिलो सिजनभर अनिमेष छाए । अरु प्रतिस्पर्धी भन्दा धेरै कुरामा अनिमेष फरक देखिए । टेलिभिजनमा देखेका दर्शकले उनलाई प्रत्यक्ष भेट्दा सजिलै चिन्छन् । ‘कोही अगाडि आएर बोल्नु हुन्छ । कोही त्यो अनिमेष होइन ? भनेको सुन्छु । यस्तै हुँदो रैछ ।’ उनले भने ।
फेम भएका मानिसहरुलाई फलो गर्ने, कल गर्ने पनि धेरै हुन्छन् । अनिमेषको सवालमा भने कल गर्ने युवतीहरु खास छैनन् । आखिर किन त ? उनको जवाफ छ– ‘खै म अलरेडी बुक्ड भएर हो कि ?’
हिमालय रोडिजको विजेता धरानका समन श्रेष्ठ हुन् । समनसँगको प्रतिस्पर्धामा अनिमेष पराजित भएका थिए । उनले अग्लो स्थानबाट हाम्फालेर झुण्ड्याइएको घण्टी बजाउनु पर्ने थियो । जसमा उनी सफल भएनन् । ‘म एकपटकमा सफल भइनँ । दोस्रो पटक गर्दा आराम गरेर, टेक्निक सबै बुझेर गर्नु पर्ने थियो । त्यो नै सायद भूल भयो ।’ उनले भने ।
रोडिजमा दिइने टास्कहरु कहिलेकाही कल्पना भन्दा बाहिरका हुन्थे । विभिन्न जीवजन्तुका काँचो मासु, अंगहरु खाने एक टास्क सम्झदै उनले भने, ‘खसीको गिदी आँखा, गड्यौंला खान निकै गाह्रो भयो । गिदीले त ‘गिदी’ नै गर्यो ।’
रोडिजको पहिलो सिजनको समाप्तिपछि अनिमेष अहिले फुर्सदमै छन् । आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने बारे केही समयमै निर्णय लिने उनले सुनाए ।